Tube Adventure: Lalao An-dahatsary Amin’ny Fiteny Roa Ao Amin’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2017 20:40 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, हिन्दी, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
(Fanamarihana: tamin'ny taona 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra tamin'ny teny anglisy)
Namorona tetikasa vaovao ny fantsona Youtube Espaniola malaza Pinofas: lalao an-dahatsary hetsika-anjoria-maheryfo izay manararaotra ny fomba fiasa vaovaon'ny lahatsary izay napetraky ny YouTube, ary antsoina hoe Tube Adventure ny lalao.
Ao amin'ny Tube Adventure, niala ny tranony mba hividy mofo ilay mahery fo, saingy nisy vazy nilatsaka teo amin'ny lohany ary niteraka fahaverezan-tadidy tao aminy: mila ny fanampianao izy mba ho tonga any amin'ny mpivaro-mofo, eny an-dalana, mihaona amin'ireo mpilalao hafa manome andraikitra azy izy, tokony hanaiky izany ve ianao sa tsia. Ny tanjona dia ny ho tonga eny amin'ny mpivaro-mofo ary mividy mofo, ary maro ireo fiafarana azo atao ao amin'ny lalao.
Hatramin'izao, amin'ny teny Espaniola ihany ny feo, saingy mampanantena ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsary fa ho amin'ny fiteny roa ny endrika manaraka. Amin'ny teny Anglisy sy Espaniola ny safidy sy ny toromarika. Tsy maintsy lalaovina ao amin'ny YouTube ny lalao mba hahitana ireo safidy maro, ka tsindrio ity rohin'ny lalao ity raha hiditra mivantana ao amin'ny pejin'izy ireo ary hilalao. Ao amin'ny bilaogin'izy ireo, Cordero TV:
Farany, taorian'ny fanemorana, ity ny Tube-Adventures. Efa nanambara izahay tao anatin'ny filazana fa tsy sketch, na tantara mitohy vaovao na zavatra tahaka izany io … Ary araka ny hitanao manokana, tsy vazivazy izany. Fa anjoria an-tsary voalohany ao amin'ny YouTube.
Ity manaraka ity ny sombiny ao amin'ny Tube Adventure:
Raha hilalao, tsindrio eto.